राष्ट्रपति भ्लादिमिर पु’टिनको कार्यकाल १२ वर्ष थप्ने प्रस्ताव रुसी संसदद्वारा पारित ! – Life Nepali
राष्ट्रपति भ्लादिमिर पु’टिनको कार्यकाल १२ वर्ष थप्ने प्रस्ताव रुसी संसदद्वारा पारित !
एजेन्सी, मस्को -राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकाल थप १२ वर्ष लम्ब्याउने विषयमा रुसी संसदले संविधान सं’शोधन प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। राष्ट्रपति पुटिनको कार्यकाल आगामी सन् २०२४ मा समाप्त हुँदैछ, तर नयाँ प्र’स्ताव अनुसार उनी सन् २०२४ पछि अरु १२ वर्ष राष्ट्रपति हुन बाटो खुल्ला हुनेछ। राष्ट्रपति पुटिनको नियन्त्रणमा रहेको तल्लो सदन स्टेट डुमामा भएको मतदानमा’ संविधान संशोधनको पक्षमा ३८३ मत र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो। सदनमा ४३ जना अनुपस्थित रहेका थिए।
संसदबाट स्वी’कृत भएको संविधान संशोधन-सम्बन्धी उक्त प्रस्तावमाथि आ’गामी अप्रिल २२ मा जनमत सं’ग्रह हुनेछ। उक्त कदमको वि’रोधीहरुले भने राष्ट्रपतिको भ’त्र्सना गर्दै यसवि’रुद्ध ‘गर्ने चे’तावनी दिएका छन्। त’त्कालीन सोभियत संघको खुफिया निकाय केजीबीका पूर्व अधिकारी ६७ वर्षीय पुटिनले रुसी सत्ता स’म्हालेको २० बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । दुई पटक पूरै चार वर्षे कार्यकाल राष्ट्रपति भएपछि उनी सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पुटिन प्रधानमन्त्री बनेका बखत उनको स्थानमा उनकै वि’श्वासपात्र दिमित्री मेद्भेदेभ राष्ट्रपति बनेका थिए।
तत्कालीन राष्ट्रपति मेद्भेदेभका बेला राष्ट्रपतिको कार्यकाल ६ वर्ष बनाइएको थियो। सन् २०१२ मा पुटिन फेरि राष्ट्रपति बने र सन् २०१८ मा उनी पुनः ६ वर्षका लागि राष्ट्रपति चयन भएका थिए। डुमाले बुधबार पारित गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताब बमोजिम राष्ट्रपति पुटिनले सन् २०२४ पछि अरु दुई कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको उ’म्मेदवार ब’न्न पाउनेछन्। यसबारे जनमत सं’ग्रह हुनु’अघि त्य’हाँको संवैधानिक अ’दालतले डु’माको प्र’स्तावमाथि वि’चार गर्नेछ। डु’माले गरेको संशोधन प्र’स्तावले रुस सरकारको कार्यकारी श’क्ति अरु मज’बूत गर्ने तथा रा’ष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रलाई अ’झ व्या’पक बनाउने अ’न्तर्राष्ट्रिय सञ्चा’रमाध्यमले जनाएका छन्।
Previous कतारमा को’रोना भा’इरस, संक्रमितको संख्या २ सय ६२ पुग्यो”
Next कोरोना त्रास: ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत कुबेतमा उडान बन्द, दुई साता सार्वजनिक बिदा